England Oo Barbaro Ku Qabatay Brazil, Lacazette Oo Labo Gool Dhaliyay Kulan Ay Isku Garab Dhaceen Germany & France & Natiijooyinka Kulamadii Kale Ee La Ciyaaray - Laacib.net
England Oo Barbaro Ku Qabatay Brazil, Lacazette Oo Labo Gool Dhaliyay Kulan Ay Isku Garab Dhaceen Germany & France & Natiijooyinka Kulamadii Kale Ee La Ciyaaray
Xulka England oo da’ yar ay u badnaayeen ayaa tijaabo adag maray iyagoo barbaro goolal la’aan ah ka helay xulka Brazil ciyaartii saaxiibtinimo ee xalayto ka dhacday garoonka Wembley ee magaalada London.
Ka dib markii qeybtii hore wax fursado ah la iska heli wayay, Philippe Coutinho ayaa ku qasbay goolhaye Joe Hart inuu sameeyo badbaadin aad u fiican halka Fernandinho uu birta garaacay isagoo kubad meel dheer ka soo qaaday.
England ayaa haatan sugi doonta kulamadooda xiga ee bisha Maarso iyagoo kulamo saaxiibtinimo la ciyaari doona xulalka Netherlands iyo Italy, laakiin England iyo Brazil ayaa haatan isha ku heyn doona isku aadka wareega group-yada Koobka Adduunka ee 1da bisha December lagu qabanayo magaalada London.
Dhanka Kale Alexandre Lacazette ayaa dhaliyay labo gool laakiin Lars Stindl ayaa Germany ka caawiyay inay barbaro 2-2 ah galaan kulan saaxiibtinimo oo culus oo ay la ciyaareen xulka France oo marti ku ahaa magaalada Cologne.
Lacazette ayaa labo jeer hogaanka u dhiibay xulka martida ahaa ee France iyadoo Timo Werner uu barbarihii koowaad u dhaliyay xulka Jarmalka ka hor inta uusan Lars Stindl ciyaarta ka dhigin 2-2.
Daanta kale xulka martigelinaya Koobka Adduunka ee Ruushka ayaa barbaro niyad-dhis weyn ah helay ka dib markii ay barbaro 3-3 ku qabteen xulka Spain iyagoo ka soo dagaalamay labo gool oo hogaanka looga hayay. Jordi Alba ayaa furay goolasha daqiiqadii sagaalaad ka hor inta uusan Sergio Ramos dhalinin rigooradii koowaad ee labo rigoore uu xalayto dhaliyay.
Laakiin Fyodor Smolov ayaa gool u soo celiyay Russia ka hor waqtigii nasashada, iyadoo Aleksei Miranchuk uu u barbareeyay wax yar ka dib. Ramos ayaa mar kale Spain ku soo celiyay hogaanka markii uu dhaliyay rigooradiisii labaad laakiin Smolov ayaa barbareeyay daqiiqadii 70aad.
Romelu Lukaku ayaa dhaliyay goolkiisii 31aad ee wadankiisa daqiiqadii 72aad taasoo ka caawisay in Belgium ay 1-0 kaga badiyaan xulka Japan.
Holland ayaa si raaxo leh waxa ay 3-0 uga badisay Romania iyadoo dhamaan goolasha ay dhasheen qeybtii labaad ee ciyaarta.
Memphis Depay ayaa shabaqa soo taabtay labo daqiiqo markii ay socotay qeybtii danbe ee ciyaarta, waxaana labada gool kale kala dhaliyay Ryan Babel iyo Luuk de Jong.
Austria ayaa guul 2-1 ka gaartay xulka Uruguay, Louis Schaub ayaa dhaliyay goolka guusha xilli danbe ka dib markii Edinson Cavani uu kansalay goolkii furitaanka ee Marcel Sabitzer.